Guurku Waa Kaabaha Bulshada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Guurku waa aasaaska qoyska, qoyskuna waa gundhigga bulshada, guurka mustaqbalka wanaagsan waxuu asliyaa dhisaana habdhaqanka bulshada kooda wax ku ool ka ah, si aad kaalin mugleh ugu qaadatid toosin bulshada guurkaaga wanaaji oo dooro lamaane waxgarad ah oo aad isfahmaysaan.
Habka doorashada lamaanaha waxay saamayn Ku lahayd sooyaalkeenna taas ayaa keeni jirtay muddo dheer inay dhallintu guurdoon ahaadaan, shaqsi kastana niyadda ku haysto astaamaha uu ku dooranayo dhigiisa, inkastoo arintaan aysan ahaan jirin mid dheelli tiran oo dumarku aysan lahayd dookh ugaara hadba kii geedka soo fariista oo ay waaridkeed isfahmaan gacan loo galin jiray.
Tiirdhaxaadka iyo lama huraanka qoyska la unkayo waa hooyada, hadba hooyadu sidey uqiimo iyo debci sareyso ayaa qoysku usaraynayaa. Qofkasta oo ilaahay uumay si kasta oo uu uwanaagsan yahay dhalliin buu leeyahay, ma dhacayso inaad hesho qof bilaa nabar ah oo iin tiran, laakiin waxaa lagu saxaa laguna toosiyaa waano iyo latalin, wax yaabaha lagu xusho gabadha wanaagsan waxaa ka mid ah dabci, dulqaad daacadnimo iyo weelaynta waanada.
Abwaan axmed maxamed xasan waa tii uu yiri:-
Waa inay dulqaad badan tahoo daacad kuu tahaye.
Mashiinka ugu qaalisan bulshada Soomaaliyeed waa dumarka, bal qiyaas guri baadiye oo hooyo ka maqantahay, aabbe ciyaalka caano uma liso karo haduu ulisana waxuu lisaa waa inyar oo ka haray qaybtii daadatay oo ridu sidey hadba lug u darsanaysay weelka lagu hoos hayo, ileen cilmi looga wareejiyo baa jiree. Abwaan hadraawi waa tii uu yri:-
Illaa guri dugsoon ma leh.
Macnaha quruxda iyo qofka quruxda badan ilaa hadda cidna kama wada sinna qofkasta xagal gooni buu ka egaa, laakiin culumada dhaqanka iyo sooyaalka ayaa quruxda dumarka kusoo kooba sodon iyo labo sifo, waa yartahay gabar soo afmeerta sifooyinkaas oo dhan balse waxaa layaableh wax caddaan ladhaho kuma jiraan sifooyinkaas. Gabdho iyo wiilalba waxaan hadda fiirinaa oo quruxda ka aamisan nahay caddaan, taas ayaa keentay in hableheenii mas ciideedka u ekaa ay dubkii iska dhigeen kabacdina hawl gab noqdeen.
Jiliyaasha ficilkaan meelkale ma jiraan ee waa labka, sababtoo hadeysan qiimayntooda qurux kusoo ururteen hableheenu ma gordanaadeen. Bulshada qarniga soo socda qaabkey u ekaan doonaan waxaa go’aaminaya guurka maanta, qoysku markuu yahay mid asluubeysan waxuu dhalayaa caruur hab-dhaqan iyo tastuur wanaagsan, laakiin ilmaha hooyadii iyo aabihii maalinkasta ku dul muddacayaan aayatiin laga sugi mayo, tiin tiin haddaan beerno timir manoo soo baxaysaa?
Waxaad doorataa lamaane kuu qalma ama kaa aragti iyo waayo aragnimo dheer si uu kuu toosiyo markaad jilicsan tahay, awal baa horay loo yiri “nin kaa naag fiican waligaa ma gaartid”.rasuulkeenii muxamed(SWC) waxuu yiri “aduunyadaan waa raaxo, teeda ugu khayr badanna waa afada wanaagsan”.
Mowduucaygu ma matalayo wiil kaliya ee gabdhahuba hadda ayagaa doorta lamaanahooda,gabadhu way badali kartaa dabeecadda ninka, asaguna sidoo kale waa marka la isticmaalo farsamooyin iyo iyo caqli celin maangal ah.
Waalidka Soomaalida qarnigaan aad bay uga fikiraan caruurya masruufkooda balse kama taliyaan habdhaqankiisa. Waa tan keentay inay soo kacaan koox tiih ku jirta oo aan ka turjumayn sawirka bulshada laga sugayey. Ummaddii Soomaaliyeed waxay ku jirtaa argagax, wax kasta oo bulshada kusaabsan way khalkhaleen, meesha kaliya ee lagi saxi karo waa badbaadinta dhasha cusub si qofkasta ugu qayb qaato sixitaanka guurka ka bilow ilmaha ku xiji.
Dhaqankii hore inta dibin daabyada nagu waddey waa inaan ka tagnaa sida hoos u dhigga dumar, tarbiyeeyn la’aanta ilamaha iyo fikirka guurka laga haysto. Dhaqankii nalaku ababiyey ayaa god daloolo badan, waxaa naloo yeeriyey in dumarka been lagusoo xero galiyo runna lagu dhaqqo taas ayaa dhashay nin iyo naagtii colna maaha nabadna maaha, reer been ku abtirsadey, labadii gurgurshaa ee qoyskuna aysan heshiis ahayn maxsuul aan sugaynaa waa maxay?.
Nabadda waxaa loo kala baxshaa labo laamood 1. Nabad togan 2. Nabad taban. Nabad togan waa nabadda wadamada dunida kowaad ka jirta, waa cadaalad, tixgalin, xuquuqsiin iyo xornimo hadal. Nabad taban waa maqnaansha khilaafka kaliya. Waa nabad ku sheegga ka jirta wadamada dunida sadexaad lagu niinaaso waliba kuwa hoose.
Qoysaskeenii baa dib udhaca iyo danbaynta siyaasadeed ka jirtaa halkaas aan xariga kasoo tidicno.
Dumarka waa run feer baa laga abuuray, waxaa daaha naloo ka qaadey dhinaca khaldan, dumarka feer qaloocan baa laga abuuray waliba tan bidix, waxaan ka dhadhan sanaynaa feertu waa laf aad muhiim uga ah ilaalinta xubno qaaliya, khaasatan tan bidix waxay ilaalinaysaa nugusha nolosha(wadnaha), hadeysan qalooc naateen shaqadaas ma qabateen.
Waano iyo wax usheeg baa lagu sixi karaa khasab cidna kuma toosto. Inaad guursatid ma xumee marka hore maxaad u guursanaysaa? Doobnida kabax kaliya miyaa? Ilmo dhal kaliya miyaad u guursan? Mise hebel waad guursadeye guurso?
Diinta islaamka oo aan tiirarkeeda haysanno aad bay udhiiri galisay guurka waliba ujeedooyin(maqaasidyo) badan oo aan fara kutiris ahayn. Ficil kasta oo aad qabanaysid intaadan qaban hadaad niyeysatid inaad ajar ka helaysid ama ilaahay dartii aad uqabanaysid ajar baad ka helaysaa. Hadalka waxaan kula hoobayaa wax kasta oo guurkaaga kusaabsan hadaad khayr ula niyootid ajar baa lagaaga qorayaa. Tusaale caruurtaada hadaad ula niyaatid inaad muslimiinta ku badinaysid, guurkaaga hadaad ula qastidid inaad xaaraanta uga nabad gashid.
Diinta waxaan ka naqaan inyar oo aan dadka ku xuuxinno ee hadddaan sifiican ugu dhaqmi lahayn waan liibaani lahayn, ilaahay waxuu yiri “dumarka si wanaagsan ula dhaqma” rasuulkuna (SCW) “kiinna ugu ikhyaarsan waa kan u ikhyaarsan xaaskiisa”. Qaacidada isu dheelli tiran waxay inoo sheegaysaa xaasaska sifiican loola dhaqmo waxay dhallaan ama koriyaan ilmo edebsan.
Odey Soomaali ah baa la waydiiyey ciyaalkaaga yaad ugu jeceshahay, waxuu ku jawaabay ” hadba kii xanuusan ama maqan” daryeelka caruurtu wa lama huraan, isku sina u jeclow.
Hadalkeyga waxaan kusoo weecinayaa dhallinyarooy nafteenna iyo tan bulshada aan u tallino, markaad guursanaysid halbeeg miisaan leh wax ku miis, kafadaadu yeysan noqon mid dhinac udheer ee miisaan u yeel, hadaad uguursatid gabar ama wiil Maraykan haku geeyo ama haku geyso labadiinuba haadaan baad kusii hoobanaysaan.
Tags: Guurku Waa Kaabaha Bulshada
Next post Qorshe Xumada Qoyska Soomaaliyeed iyo Saamaynta Dhimashada
Previous post Rabitaan Xooggan Lahow